အမဲသားလုံး ဟင်းချို | Wutyee Food House
« လာအိုစတိုင် ငါးရံပေါင်း
ဖြဲသိပ်မုန့် လုပ်စားကြရအောင် »
February 21, 2010 by chowutyee ခြင်္သေခေါင်းအရွယ် အမဲသားလုံး ဟင်းချို
၃။ ဂျင်း – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း (နှုတ်နှုတ်စင်းပါ)
၄။ ကြက်သွန်မြိတ် – ၁ခု (နှုတ်နှုတ်စင်းပါ)
၆။ ပဲငံပြာရည် (အကြည်) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၇။ နှမ်းဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၈။ ကြက်ဥ – ၁လုံး (ခလောက်ပါ)
၁။ အမဲသားလုံးအတွက် ပါဝင်သော ပစ္စည်း( အမဲသား၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ဆား၊ ပဲငံပြာရည်၊ နှမ်းဆီ၊ ကြက်ဥ၊ ကော်မှုန့်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်) အားလုံးကို သမအောင် ရောနုယ်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ဂေါက်သီး အရွယ် အမဲသားများကို အလုံးလေးများလုံးလိုက်ပါ။
၃။ ထို့နောက် ဒယ်ပြားထဲ ဆီအနည်းငယ် ထည့်၍ အမဲသားလုံးများကို နီညှိရောင်သန်းလာ သည်အထိ ကြော်ပေးပါ။
၁။ ကြော်ထားသော အမဲသားလုံးများ
၂။ တရုတ်မုန့်ညှင်း – တ၀က် (အရှည်လှီးပါ)
၃။ မှို့ခြောက်ပွင့်(အမဲ) – ၆ခု (ရေနွေးဖြင့် ၂မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပြီး အညှာမှားလှီးထားပေးပါ)
၄။ ပဲငံပြာရည် (အကြည်) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၆။ ကြက်သွန်မြိတ် – ၁စည်း (အ၀ိုင်းလေးများ လှီးပါ)
၇။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ ၁ပုံ
၁၀။ နှမ်းဆီ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ ဒယ်အိုးထဲသို့ ရေ(သို့) ဟင်းရွက်ပြုတ်ရည် ၅ခွက်ထည့်ပြီး ဆူလာအောင်တည်ထားပါ။
၂။ ဆူလာလျှင် ဒယ်အိုးအတွင်းသို့ ကြော်ထားသော အမဲသားလုံးများ၊ မှိုခြောက်၊ တရုတ်မုန့်ညင်း များကို ထည့်လိုက်ပါ။
၃။ အရသာအတွက် ပဲငံပြာရည်၊ နှမ်းဆီ၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့် ထည့်ေ၇ာမွှေလိုက်ပါ။
၅။ အရသာအပေါ့အငံ့ အနေတော်သွားလျှင် ကြက်သွန်မြိတ်များ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် များကို အပေါ်မှ ဖြူးပေးလိုက်ပါ။
၆။ ပြီးနောက် ပွက်ပွက်ဆူလာလျှင် ကော်မှုန့်ကို ရေဖြင့်ဖျော်၍ ထည့်မွှေပေးပါ။
၆။ ငရုတ်ကောင်းနံ့လေးသင်းနေသည့် အမဲသားလုံးများကို စားသုံးနိုင်ပါပြီး…
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, ဟင်းချို |6Comments	6 Responses
on February 21, 2010 at 12:47 pm | Reply Hmone Gyi
wow i never saw tht kind of soup before…new creative😉 looking delicious..😉
on February 21, 2010 at 12:57 pm | Reply chowutyee
မှုံကြီး ကိုယ်က အမဲသားစားတာ ငါမေ့နေတာ.. ကိုယ်လာလည်ရင် ကျွေးမယ်.. ပါးပါးတောင် အရမ်းကြိုက်တယ်..း)
on February 21, 2010 at 12:49 pm | Reply leo
အမရေ…လာစားသွားပါတယ်ဗျိုး။။။ အောင်မြတ်လေးနော်..ပြောရင်းဆိုရင်း ဗိုက်စာလြာ့ပီဗျ။း)
on February 21, 2010 at 12:55 pm | Reply chowutyee
Leo အားမနာနဲ့ များများစားသွားပါနော်…း) အများကြီးကျန်သေးတယ်..
on February 22, 2010 at 3:29 am | Reply thetsu
Ma , I like it very much. I’m very enjoy in cooking.thanks
on February 22, 2010 at 6:20 am | Reply chowutyee
Many Thanks Thet Su! Pls try this soup!😉